UKUSETYENZISWA OKUNYE KWEZITHUBA EZIGUNYAZISIWEYO ZEGUMBI LOKUPHILA - UKUHOMBISA
Eyona Ukuhombisa Ukusetyenziswa okunye kweZithuba eziGunyazisiweyo zeGumbi lokuPhila
Ukusetyenziswa okunye kweZithuba eziGunyazisiweyo zeGumbi lokuPhila
Amagumbi okuhlala asesikweni ziindawo zokonwabisa iindwendwe kunye nosapho ngexesha lotyelelo nangeeholide ezizodwa. Ngelishwa, uninzi lonyaka amagumbi okuhlala asemthethweni ahlala engasetyenziswanga kwaye ahlala eqokelela uthuli. Ngaba ikhe yenzeka into yokuba kusenokubakho ezinye iindlela zokusetyenziselwa indawo yokuhlala esemthethweni? Ngokunamathela kwinjongo enye yesiqhelo, eli gumbi lingasetyenziswanga linokuba yindawo ephucukileyo onokuyonwabela nosapho lwakho rhoqo.
Eli nqaku liyakukukhokela ngeendlela ezinobuchule zokuguqula indawo yokuhlala ngokusesikweni ibe yindawo yokuhlala enemveliso oya kuthi wena nosapho lwakho nibe nakho ukonwabela imihla ngemihla. Igumbi lokuzonwabisa, indawo yeofisi, ilayibrari, indawo yokudlala yabantwana, igumbi lebhiliyoni kunye nebha, igumbi lokuzivocavoca kunye negumbi lobugcisa zimbalwa zezinto ezikhoyo.
Indawo yeThala leencwadi
Indawo yeOfisi kunye neNdawo yokuHlanganela
Igumbi lokuDlala labantwana
Igumbi lomdlalo wabantu abadala
Igumbi lokuhlala ngokusesikweni linokuguqulela kwilayibrari encinci enazo zonke iincwadi ezisasazeke macala onke ekhayeni lakho. Unokwenza i-nook encinci epholileyo kunye nesihlalo sefestile okanye ibhentshi yangaphakathi kunye neetafile ezimbalwa ukwenza indawo efanelekileyo yokufunda. Ngokudibanisa iishelufa zeencwadi ezakhiwe ngokwesiko okanye iimeko zoncwadi ezikhethiweyo unokulijika igumbi lakho libe kwithala leencwadi lokwenyani.
Umbono wokugcina ubugcisa bakho obuthandayo okanye izixhobo zomculo kwindawo yokuhlala esesikweni sisicwangciso esiliqili sokujonga ukusebenza kwendawo yokuhlala.
Igumbi lezobugcisa okanye igalari inokusekwa kwinqanaba elincinci lokuthatha ixesha lakho lokuzonwabisa ngokuzisa iidesika, iidrowa zokugcina, iishelfu kunye neebhokisi zeencwadi ukugcina imeko icocekile.
Kulabo bakuthandayo ukuthunga, ukubhukisha izinto ezilahliweyo okanye enye into oyithandayo, igumbi lobugcisa linokuba yindawo entle yokukuvumela ukonwabele ukuzonwabisa. Bona Okuninzi imibono yegumbi lobugcisa Apha.
Idesika yobugcisa enemisebenzi emininzi enedrowa kunye neekhabhathi
Kulungiselelwe abo bakhetha ukuhlala ekhaya nasemsebenzini, ukudibanisa igumbi lokuhlala elisesikweni kunye neofisi okanye ukuyenza ibe yindawo yakho yokusebenza kunye nokongezwa kwendawo yokuhlangana.
Igumbi lokuhlala iisofa zinokuhlala kwaye zinokunceda kakhulu ukudibana neendwendwe. Ngeli xesha ukongezwa kwedesika yeofisi kunye neekhabhathi kunokwenza indawo isebenziseke ngakumbi imihla ngemihla.
Ukuba ungumzali ongatshatanga okanye unyanzelekile ukuba ukhathalele abantwana bakho abancinci, igumbi lokuhlala lelona ndawo linokuguqulwa libe yindawo yokudlala yomntwana wakho.
Ukuba awukhululekanga kwaoluvo lokuba wonakalise indawo apho iindwendwe zifumana umbono wokuqala wendlu yakho, indawo encinci enikezelwe ngumntwana ngaphakathi kwesinye isiphakamiso. Ukuzisa ikhabethe yokugcina enomtsalane okanye isifuba apho iithoyi zingagcinwa khona kufuneka kugcinwe ukubonakala kwegumbi.
Ukuba indawo yokuhlala esesikweni isetyenziselwa kakhulu ukonwabisa abantu abadala, ukuguqula indawo kunye nebha yasekhaya lukhetho olufanelekileyo kuba iindwendwe ezonwabisayo zihlala zenzeka kwigumbi lokuhlala.
Ungaya umgama kwaye ufake imibhobho yamanzi ukuze wenze amava apheleleyo emanzi, okanye uthenge nje ibha yasekhaya ephathekayo onokumisa ngqo apho ufuna khona egumbini.
Ibha yasekhaya ephathekayo kunye nokugcinwa kwewayini
Ukuguqula indawo yakho esesikweni ungene kwigumbi lomdlalo wabantu abadala kunokwenziwa ngokuthenga iziqwenga ezintle ezifana netafile yamakhadi enziwe ngomthi okanye itafile yebhiliyadi. Okunye izimvo zegumbi lomdlalo kubandakanya ukubeka kwikhabhathi yebhodi ye-dart okanye itafile ye-shuffleboard eya kuhlala ngokugqibeleleyo ibha esecaleni yendawo yokuhlala.
Indawo yokuhlala esemthethweni yenza uguquko olulula lube ligumbi lomculo ngokongeza ipiyano enkulu. Ukudlala ipiyano lubizo usapho lonke luya konwaba. Izifundo zamva nje ezivela eMassachusetts Institute of Technology zibonise ukuba ii-piano zekonsathi zine-cerebral cortex enkulu. Ayisiyiyo loo nto kuphela kodwa abantwana kunye nabantu abadala abadlala ipiyano banokwandisa inkumbulo yabo kwaye babe nefuthe elifanelekileyo ekuqiqeni nasekusebenzeni kwezibalo. Fumana ngakumbi ipiyano enkulu kwimibono yegumbi lokuhlala Apha.
Kwilizwe lanamhlanje leendawo zokuhlala zale mihla, umbono kukuba neendawo ezininzi ezinoxanduva ukuze kulawulwe ngokukuko indawo esesandleni. Zininzi ezinye izinto ezizezinye ezisetyenziselwa uyilo lwaseburhulumenteni ngokusemthethweni. Ukwenza indawo yokuhlala ngokusesikweni ngendlela evuselela i-aura yendlu yonke sisigqibo esenzelwe wena esinokunceda usapho lonke kwaye sikuncede ufumane ukusetyenziswa okungakumbi kwindawo engasetyenziswanga.
izimvo zesinxibo somtshato oqhelekileyo
izipho zomtshato zoyilo zabazali